Cycgba ígwè na-ewu ihe nkwata? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ngwongwo igwe - otu esi edozi
Ngwongwo igwe - otu esi edozi
Cycgba ígwè na-ewu ihe nkwata?
Cygba ígwèagaghị enye gị nnukwuisi, ma ọ nwere ike inye gị otu ihe nwere ọgụgụ isi karị n'ihi obi ya na akwara-ụlọuru.Cygba ígwèarụ ọrụ gị ụkwụ naobi ilu, ọkachasị mgbe ị na-arị ugwu, mana yana-emeagaghị adịru ogologo oge zuru ezu ma ọ bụ nye ezu iguzogideirunnukwu akwara.
Ndị na-edo onwe ha enweghị nchebe na-adị n'etiti sadulu na akụrụngwa ma ọ bụghị nke akwa, ka ọ bụ owu ma ọ bụ silk, nke a ga-eweghachi. Mgbe ị na-eyi n’etiti gị na nịịka gị, ha na-akọ ọkọ ma nwewe obi ọjọọ, na-eme ka ị nwee ihe mgbu na akpịrị ruo ụbọchị. Ya mere nwee obi ike na ihe ndị ahụ ma dọpụta onwe gị ọtọ n'okpuru uwe gị.
Gba ọsọ na-agba ịnyịnya siri ike maka ihe kpatara ya, ihe kpatara ya bụ na ị naghị enweta ọkụ ọkụ na mpaghara kachasị emetụ gị n'ahụ. Ya mere, gbaa mbọ hụ na ị ga-enweta obere uwe mwụda nwere uru dị ukwuu. O siri ike, ha gwuo na mpaghara ụfọdụ ha ekwesịghị igwu ma bụrụkwa ndị rụrụ arụ, ha na-agbagharị gburugburu na mmiri ị na-enweta dị ka ọbọgwụ na ọdọ mmiri oyi na ọdọ mmiri mara mma nke kpọnwụrụ akpọnwụ n'ihi chafing akpọrepu n'ime otu epic ọnụ ọgụgụ. .- Ọ bụrụ na ị chọghị ka patootie gị yie ka ihu ọnwa ma hichaa mkpụmkpụ gị.
Otú ọ dị, buru n'uche na ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọhụụ, ọ pụtaghị na ọ dị mma n'ihi na ịnọdụ ala na agịga ga-adabara gị nke ọma. Eleghị anya ọ bụghị ihe mbụ ị na-eche mgbe ị na-eche nkasi obi, mana mgbe anyị tinyekwuru ike na pedals, a na-etinyekwu ibu na ụkwụ, obere na buttocks.- Site na mbido enwere maka onye ọ bụla nwere obere ma ọ bụ enweghị enweghị ndidi mgbe ọ na-abịa okomoko na azụ, a di na nwunye nke nhọrọ maka ekpe ubi na m na-aga na-egosi ugbu a.
Nhọrọ nke mbụ bụ na ị nwere ohiri isi zuru oke ma kee ya na bọtịnụ onye gị ma ọ bụ ọbụlagodi nke gị iji usoro ọ bụla ị nwere. Nke ahụ kwesịrị ịbụ ọgwụgwọ. - Ọ dị mma, m ga-ekwu Matt, enweelarị m nnukwu obi iru ala na mpaghara mgbu ahụ, gịnị bụ nhọrọ nọmba abụọ? - Ọfọn, nhọrọ abụọ dị obere.
Na - enweta ohiri isi yiri nke a mgbe inwere otu aka ma tinye ya na mkpirisi gị. Ọ na-amasị m nke ahụ, dị mma. Amaghị m ihe kpatara na ndị mmadụ echebughị ya maka mbụ, Dan.
Ọ dị mma, ọkara ọkara awa ahụ gbadara m. - Oh, echere m na m nwere ike ịchọ - Enwere m ike itinye ohiri isi m? - ịhịa aka n'ahụ.
You nwere ike ịkwụsị igwe kwụ otu ebe ahụ, Dan? Nwere ike inyeghachi m eriri ọzọ? - Eeh.
Cycgba ígwè ọ na-enyere aka belata buttocks?
Gba ígwè nwere ike inyere akaụda ụkwụ, apata naaka
Yana ịgba mmiri na igwu mmiri,ịgba ígwèbụ otu n'ime omume kacha mma aerobic; ọ ga-ewusi ma zụlite nkwonkwo ụkwụ na akwara nanwere ike inyere akagịidaabụba na apata ụkwụ na ụmụ ehi.Ọgọst 11, 2011
Lee - nke a bụ 'chi m! My amụ amụ kpamkpam! 'Anyị ga-alaghachi na nke a ka anyị na-enyocha okwu gbasara ahụike ụmụ nwoke na ịgba ịnyịnya ígwè ha. Iji mee nke a, anyị na otu n'ime ndị isi na-ahụ maka urologists na UK - nwoke aha ya bụ Anthony Koupparis - soro anyị rụọ ọrụ iji nye ndụmọdụ siri ike, bara uru nke ụmụ nwoke niile na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị ị toa ntị na mgbe ịchọrọ ihe kpatara ọ bụghị nnukwu ahụmịhe ahụike iji kwenye ihe ọ na-ekwu ọ bụ nwoke nwoke ma ndị ikom a na-etinye oge dị ukwuu na sadulu. Tupu anyị amalite ọ bụ ezie, lee nkuzi ihe ngwa ngwa.
Yabụ na ọ bụ ọnọdụ amamịghe na-agba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe na mgbe 30 nkeji m rutere ma achọpụtara m ngwa ngwa na enweghị m mmetụta na amụ m, nke na-aga n'ihu, n'ihi na ọ dabara na ị maara na mmetụta ahụ alaghachila. Ya mere na njedebe m chere na ọ dịghị ihe dị ogologo oge mere, mana gịnị na-eme n'oge na-adịghị anya? N'ụzọ bụ isi n'ihi nrụgide ị na-etinye ozugbo na perineum, ị na-agbanye akwara ma ị na-agbanye ụfọdụ arịa ọbara na nke ahụ bụ ihe na-akpata ụfụ. Mgbe oge ụfọdụ nọdụrụ ala na akwara, ọ ga-ewe obere mmebi nke na-abụghị mmebi ogologo oge, ọ na-ebute isi ike na mpaghara ọ na-eje ozi, nke bụ ihe mere gị.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ anwụrụ ọkụ, ikekwe ị nwere nrụrụ erectile, mana ị nwekwara ike ịrịa ọrịa obi. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị toro eto ga-amalite ịgba ịnyịnya ígwè. Ọ bụrụ na ị bụ ugbu a onye na-agba ịnyịnya ígwè ma na ị nọ n'afọ ndụ ahụ na-etolite arụ ọrụ erectile, ihe mbụ ị chere ekwesịghị ịbụ, 'Oh, nke a bụ sadulu m' naanị n'ihi ịgba ịnyịnya ígwè. 'Okwesiri ibu, Agagh m eli isi m na ájá Nke a nwere ike ịbụ ihe na-egosi ihe na-achọpụtabeghị.
Nke mbụ, iji nweta MOT kwesịrị ekwesị site n'echiche nke obi, gịnị kpatara na ị gaghị enwe ọgwụgwọ nrụrụ erectile? Echere m, okirikiri ezuola. O meela ka ị bụrụ ntakịrị ihe na-adịghị mma na ezigbo nsogbu ahụike ị nwere ike ịhazi ya. Na mgbe ahụ ị ga-ahụ ha.
Otu n'ime ihe ndị anyị ji enye ihe ngosi nke ọrịa cancer prostate bụ ịnwale ule ọbara ma enwere echiche na ọ bụrụ na ị gbaa okirikiri ọtụtụ ị nwere ike iwe iwe prostate gị na nke a nwere ike ịbụ nyocha ọbara gị nke a na-akpọ PSA nke a na-akpọ ọbara elu. nwalee nnwale ọbara nke antigen kpọmkwem nke na-erute na ị mere nyocha ọbara ahụ ka ọ dị elu na mgbe ahụ ị nwere ọtụtụ nyocha ị na-achọghị mgbe ọ bụla n'ihi na ị na-agba ịnyịnya ibu na nke ahụ abụghị eziokwu, ọ bụghị ya - Enwere ohere ọ enwere ike imetụ gị ntakịrị, mana ọ bụrụ na ị lelee nyocha nyocha nke ụlọ nyocha na ọtụtụ, ọtụtụ akara akara mkpụrụ ndụ maka ọrịa kansa prostate, ịgba ígwè na mmega ahụ enweghị ihe dị iche na nke ọ bụla na-egosi ọrịa kansa prostate, yabụ ịgba ịnyịnya ígwè dị mma You ga-akawanye mma, ọ meziwanye ahụike gị nke obi ihe niile na - ebelata ohere ị nwere ịrịa kansa ma ọ naghị emetụta nyocha ọrịa kansa prostate na - ekwesịghị ekwesị. Ma na ọ na-aga n'ihu. N'ụzọ dị mma, enweghi nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate.
esi mara ma a igwe kwụ otu ebe dabara
Ihe anyị kwesịrị ime dị ka ụmụ okorobịa na-eche banyere ya. Yabụ ka anyị na-etolite, ohere nke ịrịa ọrịa cancer prostate dị elu. Ihe mbu ikwesiri ime ugbua bu ima ihe ufodu ihe mgbaàmà bu ugbua, ihe ndi ayi n’ele anya bu ihe dika ihe mgbaàmà banyere oru mmiri, mgbu azu, nsogbu banyere obara n’ime mmiri, udi ihe ndia, oburu n’ichegbu onwe gi. ihe ndị a, ọ bụrụ na ị hụ ihe ndị a ọzọ Mgbe ahụ ị ga-aga hụ dọkịta urologist ma ọ bụ dọkịta ezinụlọ gị ma nwee mkparịta ụka dabara adaba banyere nyocha ahụ.
Ọ pụtaghị na a ga-enyocha gị maka ọrịa kansa prostate, mana dọkịta ahụ ga - agagharị gị site na ihe ọma nke ule ahụ na ikekwe nyocha nke ule ahụ. Mbufo mbiba ẹkeme ndibiere m̀m to ikpakaha m̀m or ididaha. Achọghị m ka ụmụ okorobịa leghara ya anya na nke mbụ.
Maka ọtụtụ akụkụ, anyị na-achọta ihe ndị a tupu ụbọchị ndị a ma enwere ike ịhazi ya kpamkpam. Kedu afọ anyị na-ekwu maka ebe a? Kedu afọ ị kwesịrị ichegbu onwe gị? Enwere m ekele na enwere ike bụrụ ihe atụ dị egwu ị maara, ikpe mbụ, mana ị ziri ezi.
Ya mere, na nke m na omume m, enwere m foto gbagọrọ agbagọ. Ya mere, anyị nwere nnukwu ọrụ dị otú a na ị ga-enwe ndị ọrịa site na 30 ruo 80 na 90s na-eche banyere ya, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà ọ bụla na-echegbu onwe gị, atụla ụjọ, etinyela isi na ájá ma duzie na nyocha nke ihe nsogbu ahụ bụ, ọ bụrụ na enwere akara uhie ọ bụla iji mee ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Yabụ enweghị njikọ dị n'etiti ịnya ịnyịnya na ọrịa cancer prostate, mana ọrịa cancer prostate bụ nnukwu ihe maka nnukwu akụkụ nke ndị na-agba ịnyịnya Nsogbu naanị n'ihi na ha bụ ụmụ nwoke, ha emeela agadi, n'ihi ya kwa, ha kwesịrị ichebara ya echiche nke ọma Amaghị m gbasara gị Mana ihe kachasị m mkpa site na mkparịta ụka a mụ na Anthony bụ na anyị nwere ike ghara iji ahụike anyị gwurie egwu, anyị kwesịrị ịnwụ ọnwụ nke anyị ma chọọ enyemaka mgbe anyị chọrọ ya n'ihi na anyị anaghị adị gs bụ nnukwu nsogbu anyị niile ga-eche ihu ugbu a enwere m ike ịfefe ntakịrị ihe ọmụma mgbe m na-agwa gị gbasara mkpịsị m na-eme na ifufe ma ana m eche n'echiche ahụ ikekwe anyị niile kwesịrị ịnwa inwe otu Mkparịta ụka - yana ndị enyi anyị na klọb na-agba ya ngwụcha izu, ma ọ dịkarịa ala nwee nkata banyere isiokwu a echere m na ọ ga-abụ ebe dị mma ịmalite.
A na-agba ọsọ dị mma maka isi gị?
Ọ bụrụị na-na-achọ ụzọ mbo mbulinke giazu na-abawanyenke ginwee ndidi, ị nwere ike ịtụlena-agba ọsọ. Ingla elu na ịkụ paịlị na-eme ka ikuku na-eme ka ikuku na-adị mma kama ọ na-ewusi ikeidomo gi, ma ọ bụ mọzụlụ dị naisi gi.Ọnwa Ise 5, 2021
Taa, anyị ga-elekwasị anya na buttocks, ọkachasị otu ndị na-eme ọfụma na-enye gị butt ya ụdị na arụmọrụ. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, isi gị abụghị ezigbo ọmarịcha ma na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịga ije na ịgba ọsọ na akụ na ụba na-eme ka gị na m chọpụta ihe kpatara ya na, n'ezie, otu esi eme ka ike gị sie ike. oge ụkwụ gị na-akụtu ala anyị, ha na-arụkwa ọrụ maka ịkwalite ka ị na-agba ọsọ ma na-eje ije mgbe oke gị na-agbapụ nke ọma, Ugbu a ọ bụ maka ịme onwe gị nke ọma oge ọ bụla ị kụrụ n'ala ka ị wee nwee ike ịgba ogologo. Ha na-ebelata ihe ize ndụ nke mmerụ ahụ, ha na-enye gị ohere ịzụ ogologo oge ma mee ka ị rụọ ọrụ nke ọma, ọ bụ mmeri na nke ọma, usoro nkwalite ahụ dị ezigbo mkpa, ọkachasị mgbe ị na-amalite ịgba ọsọ ọsọ karịa kedu ihe ọ bụ na ha dị mma ị nwere ike ịnụ banyere Glutemax ma ọ bụ Gluteus Maximus, nke kachasị ukwuu n'ime akwara atọ ahụ ma mejupụta ọtụtụ uri gị, na n'ezie ndị ama ama, mana anyị agaghị echefu Gluteus Minimus na Gluteus na Medius Agaghị m mụụrụ gị ahụ dị ukwuu n'ime omimi, mana anyị nwere obere animation ebe a iji kọwaa etu atọ glute min orgoat es minimus si dịkarịsịrị nta ma dịkarịsịrị omimi n'okpuru gluteus Meade na akụkụ n'ihu ya, mana ha abụọ dị n'akụkụ nke úkwù gị na thengaloot na Meade ma ọ bụ gluteus medius bụ akwa na-esote ya na dịka ị pụrụ ịhụ na ọ na-ekpuchi nnukwu ebe ma na-anọdụ ala obere azụ, mana ma ọ dị elu na mgbe ahụ enwere nnukwu ọ gụ max orgluteus maximus, dị ka aha ahụ na-egosi , ọ bụ ma ndị Nke kachasị ukwuu na nke kachasị elu ma na-anọdụ ala n'azụ, akwara atọ a niile na-arụkọ ọrụ ọnụ iji chịkwaa mmegharị gburugburu úkwù gị, ha na-ekwekwa ka ụkwụ gị na-agagharị ma na mwepu na ntinye na-eme ka mgbatị mgbatị na-eme ka ụkwụ gị laghachi, nke ọma ntụgharị nke ime na mpụga nke na - agbanwegharị ụkwụ gị niile n’otu ụra, mana kedu ihe ọ pụtara n’ezie mgbe ọ bịara n’agba ọsọ inwe hips siri ike ma kwụsie ike nke na - enyere gị aka ịrụ ọrụ nke ọma karịa? dị ka ndị na-agba ọsọ ma na-anọkwa na-enweghị mmerụ ma na-ekwu maka mmerụ ahụ. dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na nke gị Glutes na-agbapụ nke ọma mgbe ahụ ị nwere ike ịchọpụta na ikpere gị ma ọ bụ ụkwụ gị na-agagharị ntakịrị, na-eme ikpere ikpere gị ka ọ ghara ịgbaso ikpere ikpere gị wee soro ndị na-agba ọsọ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma banyere aha ndị na-agba ọsọ anyị nwere n'ezie ederede banyere nke a, yabụ m ga - atụ aro ịlele ya na ọwa anyị ozugbo ị nọ ebe ahụ, ị ​​gaghị enye anyị ihe dị ka ya na Soro enwere nsogbu abụọ mgbe anyị na - ekwu maka mmejọ anyị anaghị arụ ọrụ c Kachasị ihe bụ ọkụ ha na nke ọzọ bụ ha ike na ọ bụ ezi echiche anya na ebighị mbụ na e nwere ndị a ole na ole anyị Deliciously Simple Tests You Pụrụ Ime Iji chọpụta Ọ bụrụ na gị glutes na-N'ezie na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị probably nwere ike chepụtara maka ule a na ị ga-amalite dinara ihu na ala - Naanị m na-etinye aka na njigide gị na n'elu nke a N'akụkụ ị ga-anwa ịkwalite ụkwụ gị na mgbatị na-agagharị ma nwee olile anya na ị ga-eche na mmechi gị na-agbatị n'okpuru aka gị, mana nke a abụghị mgbe niile n'ihi na anyị ahụ dị ezigbo mma na ịkwụ ụgwọ ma ị na-eme mmegharị a n'ezie site na iji ọtụtụ akwara ụkwụ gị kama ịme ihe ọfụma gị, yana ọfụma ịchọrọ ka mmekpa ahụ gị buru ụzọ gbaa ọkụ ma mee ọtụtụ ọrụ ahụ.
Ule a nwere ike ghọọ ezigbo mmega ahụ, yabụ jide aka gị na gluu gị iji chọpụta na ọ na-ere ọkụ nke ọma mgbe ị ka dinara ala, pịgharịa ihe ọchị gị, ma mgbe ị nwere nkwekọrịta ahụ, jide u uze tight and mgbe ahụ bulie ụkwụ gị elu na ala ọzọ. Tinyegharịa a ugboro iri na mgbe ọzọ na n'akụkụ na ị nwere ike igwu na ya a bit n'ihi na ụfọdụ ndị na-ahụ ya mfe n'ezie rụọ ọrụ ha butto site na-akpụ akpụ gị ụkwụ ma ọ bụ Ehulata ikpere gị na mgbe ahụ ka na-eme otu ndọtị ije ma ọ bụ a obere oge na-egbu oge, ule ọzọ ga - egosi nrụrụ ezighi ezi. Median Glute Min na-emegide Glute Max ka ị guzo n'ihu enyo na aka gị n'úkwù gị wee chọpụta na ha dị larịị ma ha na-eme ebe arịlịka wee si ebe ahụ gbanwee ibu gị n'otu akụkụ wee were nke ọzọ ikpere nke na-abụghị ihe niile dị arọ, ibu ruo ogo 90 na isi ihe kachasị mkpa ebe a bụ ile anya n'ogo ma ọ bụ ọnọdụ aka gị na enyo ma ha kwesịrị ịnọ larịị mgbe ịchọtara na akụkụ ahụ bilitere bụ eziokwu na-ada na ikpere a wụlitere na-ada ada n'ụzọ a ọ na-egosi na njị gị na-abụghị akụkụ na-agbapụ nke ọma, ịnwere ike ịtụgharị nke a ka ọ bụrụ mmega ahụ ka ọ bụrụ na ịnwe njikwa ahụ na nwayọ nwayọ, nwere ike ime ka ha nwekwuo ike na mkpa ka i wee tinye ha na ogwe aka mbanye ka na-agba ọsọ na ị ga-dị nnọọ pumping Ogwe aka gị na ikpere gị ma ọ bụrụ na ị na-eme nke a ugboro 10 na ị ga-ahụ na nke a ike ije n'ezie na-eme ka ọ na a bit ike na-agba ọkụ ndị buttocks ọbụna karị na mgbe ahụ na-ekwughachi ya na nke ọzọ dị ka nke ọma, ugbu a ị maara ma ọ bụrụ na ike gị nwere ike ma ọ bụ ghara ịgba ọkụ nke ọma, ị nwere ike ịrụ ọrụ na iwusi ha ike ma rụọ ọrụ ha nke ọma, yana ule abụọ anyị gbaara nwere ike ịga n'ihu na ihe dịka ihe mmachi .
Yabụ mgbe ị na-ele ihe mgbatị ahụ ị na-eri, ị nwere ike kechie ikpere gị ka ị wee chọọ ya ntakịrị, mana ịchọrọ ijide n'aka na ị ga-agbatị ikpere ikpere gị ka ọ bụrụ na mgbe ị gbatịchara úkwù gị, ị ga-enweta ihe kachasị nke ọkụ gị, mana ụfọdụ g lute mita dị mma n'ihi na ị ga-anagide ma ịba azụ na azụ azụ na mgbe ọ bịara n'ụkwụ ụkwụ ị ga-etinye ya n'ụkwụ gị ka ị kwụ teepu na mgbe ahụ ị ga-enwe nguzogide ahụ ka ị na-adọta ikpere gị n'ime mgbatị, mana ị ga-eguzogide ihe ahụ dị n'ime ya ka m wee gbaa ọkụ niile ọzọ. CREB ije aghọwo ihe a na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya ị nwere ike ịhụ ndị na-eme ya Iji mee nke a n'ụlọ mgbatị ahụ, ị ​​ga-achọ ụdị mmega ahụ ụfọdụ ma ịchọrọ itinye ya na nkwonkwo ụkwụ gị ma ọ bụ karịa ikpere gị wee nwee ike ịmalite ọnọdụ gị ị chọrọ ka gị n'úkwù úkwù na ikpere na-atụ na-atụ, hip-obosara iche, n'ihi ya, na-ekwu okwu, ya mere a erughị ala na akwara na mgbe ị ga-esi n'ime a demi-squat, otú a mara mma ehulata ikpere na dị nnọọ anya n'ihu gaa n'ihu ma gbaa mbọ hụ n'úkwù gị na-anọ nke ọma yana ị ga-aga n'akụkụ ụkwụ n'akụkụ n'akụkụ ando mgbe ị gachara iri ị nwere ike ịtụgharị ma gaa n'ụzọ ọzọ na oge niile ịchọrọ ilekwasị anya na idebe ha dị nro ma jide n'aka na isi anyị anaghị agagharị na ala nke ukwuu na mgbe ịmechara ma ụzọ 10 ahụ zuru ike ma kwughachi otu oge ma ọ bụ ma eleghị anya ugboro abụọ na ị ga-amalite ịmalite inwe mmetụta dị ọkụ na akwara gị ma eleghị anya 'ị enweghị ohere ime ụlọ mgbatị gị iji were nzọụkwụ iri n'otu ụzọ na azụ, ma ọ bụ naanị na ị chọrọ A. lternative, nke ọma ị nwere ike ịme nke a ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ọzọ, atụpụtara m ya n'ihu enyo ka i wee nwee otu ọnọdụ mmalite na demisquat a ma site ebe a ọ na - enyere aka ọ bụrụ na ị na-etinye aka gị n'úkwù gị nanị ịlele na ị na-eme ya, gbanye ibu ahụ n'otu akụkụ ma site n'ebe ahụ ị ga - ewepụ ụkwụ gị ma pụọ ​​gị n'akụkụ nke ahụ ma enwere m ike ịnụ ya ozugbo, nke ahụ bụ n'ezie mara mma ike, ọ bụ ihe ufiop karịa na Side nzọụkwụ na i nwere ike ime nke a ise na ugboro iri na nke ọ bụla ụkwụ ma ọ bụrụ na ị na-eche dị ka ikwugharị ya otu ugboro ma ọ bụ ọbụna ugboro abụọ na e nwere ihe ọzọ ọdịiche nke ihe omume a na activates glutes ntakịrị ka nke mere ka na-eme Otu ihe ahụ na-amalite ibu nke onye na-egwu egwu na-ebufe ya n'otu ụkwụ na akwara na-agbanye gburugburu nkwonkwo ụkwụ gị ma site ebe a ị ga-agbatị ụkwụ gị n'akụkụ.
Will ga-ewepụ ya na azụ na ntụgharị ihu na-eme nke a na ịgbatị azụ a yana mgbatị a ga-agbapụ ọkụ atọ a niile, o doro anya na mmemme ndị gara aga na-eme ka ọrụ rụọ ọrụ mana ha ga-emekwa ka ike dị ike nhọrọ nke ndị ahụ ma ịchọrọ ime nke a tupu ịmalite ịga na omume ndị a m nwere nke metụtara njikọta ike na ọzọ ịchọrọ ịhọrọ mmadụ ole na ole site ebe a site na iji igwe mkpuchi ma ọ bụ azụ mgbatị, ma ọ bụ physioball ma ịchọrọ ịchekwa ụkwụ gị, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala nwee ha n'ala, nke ị na-egosi ịpịgharị ha, yabụ n'ụzọ bụ isi na úkwù gị na mgbe ịmalitere na ọnọdụ a apịaji ị chọrọ izu ike aka gị ntakịrị n'akụkụ ọ bụla isi ma chee echiche banyere ime ka isi gị na ọkpụkpụ gị rụọ ọrụ Na-edebe ndị ule n'ọnọdụ ọ bụla na-anọpụ iche dị ka mmegharị niile kwesịrị ịdị na-eme n'úkwù gị, ọ bụghị obere ala gị na ee ọ ga-eme ka akwara azụ gị dị ntakịrị iji debe ị nọ ebe ahụ, ọ ga-emekwa ka eriri ụkwụ gị sie ike, agbanyeghị N'ikpeazụ, ịchọrọ n'ezie ilekwasị anya na mkpịsị ụkwụ gị, ozugbo ị nọ n'ọnọdụ mmalite gị, chee echiche maka ịkwanye ọkụ gị iji gbaa ha ọkụ wee jiri ya mee ihe iji gbatịa. mee ka ahụ gị megide ike ndọda ruo mgbe ị ga-abanye n'ahịrị kwụ ọtọ site na hips, ubu na ikpere gị wee jide n'aka na ị ga-akpachara anya ka ị ghara ịgbatị na m ga-asị na ọ bụrụ na ị nwere nsogbu azụ, m ga-ezere mgbatị a ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala na ọkachamara Ka ha wee jide n'aka na ị na-eme ha nke ọma. Omume a dị ka ịdị ọcha dị ọcha ka ị na-arụ ọrụ megide ike ndọda maka ugboro atọ ugboro ise. Mee ka ọnụ ọgụgụ ugboro ugboro kwa izu ruo mgbe ị ruru iri, mgbe ahụ i nwere ike iche maka ịgbakwunye ụma ndị ọzọ.
Naanị mee ka ịdị arọ ahụ dị nso n'obi gị ma debe usoro fọdụrụnụ na otu ahụ na mmega ahụ ga-abụ njikọta nke azụ gị na mgbatị dị ka m kwuru, mana ha abụọ ga-arụkọ ọrụ ọnụ mgbe ị na-agba ọsọ akwa akwa hip. mmega ahụ nke yiri ka ọ na-ewu ewu na mgbatị ahụ, ma eleghị anya maka ebumnuche mara mma, mana ọ na-emekwa ya site na ndị na-agba ọsọ ogologo oge n'ihi na ọ na-enyere aka na-agba ọsọ nke ọma n'ihi na ọ na-eji njigide gị na akwara ụkwụ, ya mere ọ bụ n'ụzọ bụ isi a Nzọụkwụ dị site na akwa mmiri dị mfe na ọkọlọtọ nke dị n'azụ gị na ikpere ikpere ụkwụ gị na-agbatị ụkwụ, na-ejigide isi gị na ị na-agbanye úkwù gị n'uko ụlọ ruo mgbe enwere eriri kwụ ọtọ site n'ubu gị ruo n'ikpere gị na Ndozi on k on Ọ bụrụ na ị na-gị hips mma na larịị, ị nwere ike ịgbasa a n'ime otu-legged hip àkwà mmiri na-edu. Na-elekwasị anya na idobe úkwù gị n'ọnọdụ a, ọ ga - arụ ọrụ ike gị na ịmịkọta gị n'otu oge, yabụ ị ga - achọ physioball ma ị ga - ebido site na ị dinara azụ, na-etinye ikiri ụkwụ gị na bọọlụ wee bulie hips gị elu. gaa n'uko ka ị nwee akara ogologo dị mma na-agba site na nkwonkwo ụkwụ gị ruo n'ubu gị yana ihe ọ bụla ị ga-eme iji nwee ike ịmalite akwara gị, ọ ga-adị gị mfe oge niile na-adọ gị n'ikiri ụkwụ ka ị na-agba mbọ ubu gi na torsonic ma ka na-eme ka a ga-asị na ị bụ, ọ bụrụ na ịchọta nke a dị mfe, ị nwere ike wepu ya ka ị mee otu ụkwụ nwere ụkwụ na otu njikwa I na - ebuli otu ụkwụ n'ụgbọ mgbe ahụ, otu ụkwụ na-dọtara azụ gị butt na pụọ ​​ọzọ na na oge na ị chọrọ n'ezie ịbụ nchebe Jide n'aka gị hips-anọ mma na larịị ofụri ije. Achọrọ m ịkwụsị na obere ederede anyị anaghị achọ ịnweta Kim Kardashian ma ọ bụ JLo Shake Derriere ebe a, agbanyeghị anyị na-anwa ị nweta ọfụma zuru oke nke ga-enyere anyị aka itinye ike anyị niile na ya, na-aga ngwa ngwa. na ihe ndị ọzọ na-aga n'ihu na-ejikwa nwayọ ma enwere nnukwu omume dị iche iche ịhọrọ, ọ bụrụ na ị maghị ma onye ị họọrọ ga-eme ka mmegharị gị rụọ ọrụ, atụla egwu naanị inwe mmetụta, tinye aka gị n'isi mgbe ị na-eme mmega ahụ, ị ​​ga - amata n’oge na - adịghị anya ma ọ ga - ama ụra n’okpuru ma ị ga - enweta ọkụ ahụ ọfụma .Ka m mara ihe mmega mmuta kachasị amasị gị.
Can nwere ike ime nke a na nkọwa dị n'okpuru ebe a ma lelee ọwa anyị ndị ọzọ na GT ma nye anyị ihe dịka na soro onye ọ bụla jụrụ gị
Kedu ka ịgba ịnyịnya ígwè si enye gị nnukwu butt?
Gba ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ n'ụkwụ gị ma mee ihe ọchị, karịsịa mgbe ị na-arị ugwu, mana ọ naghị adịte aka ma ọ bụ nye gị nguzogide zuru ezu iji wulite akwara. Ọ na-ewe karịa ịnyịnya ígwè inye gị nnukwu butt. Kale pesto a dị ịtụnanya bụ naanị calorie 210 na ọgaranya oxidant bara ọgaranya!
Gịnị mere My Butt ji afụ ụfụ mgbe m gba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe?
Ozi ọjọọ a bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ihe na-adịghị arụ ọrụ, yabụ ọ dị nwute na akwara ha anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ndị isi na-eme umengwụ na ahụ ike ndị ọzọ na - eweghara - dịka quads gị dịka ọmụmaatụ. Nke a bụ otu ihe kpatara ọtụtụ mmadụ ji ejedebe na ọnya quads mgbe ha gbasịrị ịnyịnya ígwè, mana ọ nweghị mgbe ọ na-adị ya na isi ha.
Kedu ka ịnya ịnyịnya ígwè si dị mma maka njimara gị?
Nke a bụ otu ọ masịrị m ịnọ n’elu igwe m maka mgbatị ahụ dị mma. Ọkpụkpụ kwụ ọtọ na ogo 90 gbagoro na ikpere na-eme ka ntọala ahụ dị ka ịme otu ụkwụ ma ọ bụ ụkwụ ụkwụ. N'ụzọ ahụ, mgbe ị na-agbada na pedal ahụ, ọ dị ka ịme otu ụkwụ ụkwụ miri emi nke ị nwere ike ịkwanye site na glutes gị.